DAAWO: Baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo la dhaariyey, Doortayna Guddoon cusub.
KISMAAYO(P-TIMES)- Mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ee ay xalay shaaciyeen guddiga Doorashooyinka ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyey xilkan, waxaana ay doorteen guddoonka baarlamaanka KMG ah.
Mudanayaasha cusub ayaa lala dardaarmay, waxaana ay ku dhaarteen in ay dhawri doonaan Danta dalka, Dadka iyo Diinta oo ay sheegeen in ay u shaqeyn doonaan Jubbaland.
Xildhibaanada cusub ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka ayaa dhinaca kale waxaa jira khilaaf ka dhashay oo ka imaanaya dhinaca Musharaxiinta ka soo horjeeda.
Guddiga Doorashooyinka ee Madaxweynaha Jubbaland magacaabay dhawaan ayaa xalay liiskan baahiyey, waxaana taasi ay keentay in ay dhinaca kale Iyana magacaabaan xildhibaano kale, oo aan la aqoonin halka lagu dhaarin doono.
Mudanayaal katirsan labada Aqal ee dawladda Soomaaliya ayaa ka qeybgalay munaasabada dhaarinta mudanayaasha cusub ee Jubbaland, taas oo ka dhacday magaalada Kismaayo.
Xildhibaanada labada golle waxay ku dhiirgaliyaan mudanayaasha cusub in ay garowsadaan waajibaadka Shaqo ee ay maanta u dhaarteen, loona baahan yahay in ay Jubbaland danheeda ka shaqeeyaan.
Madaxweynaha Jubbaland ayay wararku sheegayaan in uu hadda isku diyaarinayo doorashada Madaxweyne-nimada, gaar ahaana tartan adag isagoo aan la galeyn dhinacyada ka soo horjeeda, maadaama ay qaadaceen sharcinimada guddiga.
Gudoomiyaha KMG ah ee baarlamaanka JUbbaland
8 kamid ah baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo gabdho ah.
Guddiga Doorashooyinka ee soo xulay mudanayaasha baarlamaanka oo madasha ku sugan.